ခိုလှုံရာမဲ့ ကလေးများ အစီရင်ခံစာထုတ်ဝေ | B.M.T.A Burmese Migrant Teachers' Association
← We are teachers ; thease viedos made us painful please help them to become students together with us
မလေးရှားနိုင်ငံတွင် သူတောင်းစားအဖြစ် လုပ်ကိုင်ခဲ့ရသည့် မြန်မာကလေးငယ် ၆ဦး အကူအညီတောင်းခံ →
ခိုလှုံရာမဲ့ ကလေးများ အစီရင်ခံစာထုတ်ဝေ	Posted on April 7, 2010	by bmta05 ဧပြီ ၇၊ဘန်ကောက်။
အစီရင်ခံစာတွင် ပထမဦးဆုံးဖေါ်ပြထားသည်မှာ ပြည်တွင်ဒေသမှ ဖိအား အမျိုးမျိုးကြောင့် မိခင်နယ်မြေ ဒေသကိုကို စွန့်ခွာပြီး ထွက်ပြေးလာရသော ကလေးများ၏ ခံစားချက်များနှင့် အတွေ့အကြုံများကို ဖေါ်ပြထားသည်။ နအဖစစ်သားများက သူတို့ ၏အုပ်ချုပ်သော ဒေသတွင်းနှင့် အပစ်ခတ်ရပ်စဲရေး ဒေသများတွင်၎င်း၊ ပုန်းကွယ်နေရသည့် ဒေသများတွင်၎င်း ကလေးများအပေါ် ဖိနှိပ်မှုများကို အဓိက ဖေါ်ပြထားသည်။
ကိုမန်းကီးက ဆက်လက်ပြောပြရာတွင် “ကျနော်တို့ က ပြည်သူတွေနဲ့ အတူရှိပါတယ်၊ ပြည်သူတွေနဲ့ အတူ အသက်လုပြီး ထွက်ပြေးရပါတယ်၊ ကျနော်တို့ အချိန်မရွေး အသတ်ခံရနိုင်ပါတယ်၊ ဒါပေမယ့် ကျနော်တို့စွန့်စားပြီး လုပ်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်၊ ကျနော်တို့ ဒီလိုလုပ်နေတဲ့အတွက် မသေသင့်တဲ့လူတွေမသေတော့ ဘူး၊ ဘာမှမသိတဲ့ အနေအထားကနေ ကျနော်တို့ ပြောပြတဲ့အတွက် သိလာတတ်လာတွေရှိပါတယ်၊အင်္ဂလိပ် မစ်ရှင်တစ်ဦးရဲ့ ကောင်းမှုပေါ့လေ”ဟု ပြောသည်။
ဤအဖွဲ့သည် နအဖအစိုးရက နယ်စပ် တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့များအား အကြီးအကျယ် ထိုးစစ်ဆင်နွဲစဉ် ၁၉၉၇ခုနှစ်က လူထုလိုအပ်ချက်အရ ပေါ်ပေါက် လာရခြင်းဖြစ်ဟုဆိုသည်။ Free Burma Ranger အဖွဲ့နာမည်ဖြင့် မြန်မာနယ်စပ် ဒေသတိုင်းတွင် အဖွဲ့ပေါင်း တစ်ရာကျော် ကွန်ယက်ဖြန့်ကျက် လှုပ်ရှားလျှက်ရှိကြောင်း ပြောပြသည်။ အချိန်ပြည့်တာဝန် ထမ်းဆောင်နေသော အဖွဲ့ မှာ ၅၂ ဖွဲ့ ရှိသည်။ ရှမ်း၊ ကရင်၊ ရခိုင်၊ လားဟူ၊ ပအို့ဝ်၊ ချင်း၊ ကချင် အပါအ၀င် လူမျိုးစုပေါင်း ၁၀ခုနှင့် ဖွဲ့စည်းထားကြောင်း Free Burma Ranger အဖွဲ့ ခေါင်းဆောင် Steve Gumaer က ပြောဆိုသွားသည်။
ထိုသို့ အချက်အလက် အတိအကျ ခိုင်ခိုင်မာမာရရှိရေးအတွက် အချိန် အတန်ကြာအောင် စွန့်စား လုပ်ဆောင်ခဲ့ရပြီးမှ ယခုကဲ့သို့ ထုတ်ဖေါ်ပြရခြင်းဖြစ်ကြောင်း ပြောခွင့်ရ အမျိုးသမီး Amanda Carroll ကလည်း ရှင်းလင်းပြောဆိုသွားသည်။ ဤအစီရင်ခံစာ ထုတ်ဝေသည့် သတင်းစာ ရှင်းလင်းပွဲသို့ ဘန်ကောက် အခြေစိုက် မြန်မာ သတင်းဌာန အချို့နှင့် နိုင်ငံတကာသတင်းဌာနတို့က သတင်းထောက်များ၊ လေ့လာသူများ တက်ရောက်ခဲ့ကြသည်။
This entry was posted in သတင်း, Burmese pages only. Bookmark the permalink.	← We are teachers ; thease viedos made us painful please help them to become students together with us